जीवन 'जात्रै-जात्रा' हाे: रविन्द्रसिंह बानियाँ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जीवन 'जात्रै-जात्रा' हाे: रविन्द्रसिंह बानियाँ
जेठ २, २०७६ बिहिबार १९:३४:१४ | दीपा तिमल्सिना
काठमाण्डौ- 'भाग्यमानी त्यही बज्ये हुन्छ रे
जसका गफले चन्द्रमा छुन्छ रे
अभागीको लौ कुरै नगरौँ न हो
टुलुटुलु हेरेरै रुन्छ रे
जीवन जात्रा हो
शास्त्रमा लेख्नलाई छुट्या मात्र हो
जीवन जात्रै जात्रा हो...'
शुक्रबार रिलिज हुने चलचित्र 'जात्रैजात्रा' को यो गीत अहिले निकै चर्चित छ । यो गीतले मानिसको जीवनसँग मेल खाने भन्दै रुचाइएको पनि छ ।
नेपाली रजतपटको दुनियाँमा पछिल्लो समय कछुवा गतिमै भए पनि गुणस्तरीय चलचित्र भित्रँदै छन् । भनौँ नेपाली रजतपट सुधारोन्मूख अवस्थातर्फ बढ्दैछ । अहिले एउटा खुराकले भरिएको भन्दै जात्रैजात्रा लाई आशातीत चलचित्रको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
रंग क्षेत्रमा निखारिएर आएका कलाकार र यसअघि सामान्य विषयवस्तु र दैनिकीलाई सरल रुपमा प्रस्तुत गरेको चलचित्र 'जात्रा' कै सिक्वेल र तिनै कलाकारका कारण पनि 'जात्रैजात्रा' बाट धेरैले आशा राखेका छन् ।
हुन त हिजोआज चलचित्रको स्क्रिप्ट र पटकथा भन्दा पनि प्रचारप्रसारलाई मात्र फिल्म युनिट र कलाकारले जोड दिएको भन्ने सम्रग आलोचना हुने गरेको छ । यही सेरोफेरोमा दीपा तिमल्सिनाले 'जात्रैजात्रा' का निर्माता एवं कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
'जात्रैजात्रा' रिलिजको संघारमा छ ? दौडधुप कत्तिको छ ?
चुनाव लागेको नेता जस्तै, बिहे लागेको घर जस्तै, असार लागेको किसानजस्तै प्रचारप्रसारमा दौडिरहेका छाैं, हामी ।
फिल्मको स्क्रिप्ट, पटकथा र प्रस्तुतिमा भन्दा पनि प्रचारप्रसारमा मात्रै हिजोआज बढी दौडिएको पाइन्छ । प्रचारप्रसारले मात्रै चलचित्र चल्छ ?
जमाना नै बोल्नेको पिठो बिक्ने, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भने जस्तै भयो । बजार सानो छ, तर हल्ला धेरै छ । यही हल्लामा आफ्नो कुरा सुनाउन अलि चर्काेरुपामा बोल्नु पर्ने भएको हो । सूचना दिन पनि हल्लै गर्नु पर्ने रहेछ । तर राम्रो नराम्रो दर्शकले नै छुट्टाउनुहुन्छ । यो जिम्मा उहाँहरुकै हो ।
'जात्रा' फिल्मको अन्त्यमा दर्शकले अलिकति मन दुखाएका थिए । फिल्मको अन्त्य अलि खल्लो भयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो । 'जात्रैजात्रा' 'जात्रा' कै सिक्वेल हो कि ब्राण्डको लोभले यो नाम जुराइयो ?
हामी आफूलाई आफैँले स्वयं आत्म आलोचना गर्न सक्नुपर्दछ । यो गर्न सकेनौं भने एक दिन हामी आत्मरतिमै भुल्छौँ । मान्छेमा लोभ हुन्छ । लोभ, भोग भएर नै मानिस भएको हो । नत्र भगवान भइहालिन्थ्यो नि । 'जात्रैजात्रा' 'जात्रा' कै सिक्वेल हो । जात्रा जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीँबाट कथा सलल बग्दछ । तर 'जात्रा' मा पैसाको कथा धेरै थियो भने 'जात्रैजात्रा' मा पैसासँगै सुन पनि थपिएको छ । एउटा धनसम्पत्ति नभएको मानिसले सुन र पैसा पायो भने के के गर्छ भन्ने कथा नै जात्रैजात्रामा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
नेपाली फिल्मको संख्या बढ्दो छ, लगानी पनि ओइरिँदो छ । तर गुणस्तर भने कमैको मात्र छ । यसले नेपाली फिल्मको भविष्य कतातर्फ लैजाला ?
नेपाली फिल्म वर्षौंदेखि लागेका छन् । तर निर्माताले कथा राम्ररी नबुझिकन एकै पटक हामफाल्दा दिगो हुन सक्दैन । बुझ्दै नबुझी फिल्ममा लगानी गर्दा प्रतिफल आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले गर्दा हजुरबुवाले फिल्ममा लगानी गरेको छ भने तीन पुस्ता नातिसम्मले गाली गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । विषयवस्तुबारे जानकारी नहुँदा लगानी डुब्ने जोखिम त धेरै छ ।
फेरि पनि 'जात्रैजात्रा' मा फर्कौं । अरु फिल्म भन्दा जात्रैजात्राको स्वाद कतिको फरक र स्वास्थ्यवर्द्धक छ ?
यतिबेला दर्शकको रुची बुझ्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । सधैं एकैनासको खानाले जो कोही आजित हुन्छ । तर दिनहुँ खाइने खानामा अलिकति फरक स्वाद मिसाएर बानी पारियो भने त्यसको स्वाद त फरक भयो नि । हामीले त्यही उपाय अपनाएका छौं । मध्यम र निम्न आय भएका वर्गका कथालाई 'जात्रैजात्रा' ले समेटेको छ ।
'जात्रैजात्रा' को सन्देश चाहिँ के हाे ?
हामी बस्ने समाजको सोचाइ नै गलत छ । हामी जिन्दगीभर दुःख गर्छौं । तर दुःख भन्दा पनि जीवनको मापन घर सम्पत्तिमा मात्रै दाँजिन्छ । काठमाण्डौमा घर र गाडी किने उसले प्रगति गरेको ठहरिन्छ । हामी, हामी बस्ने समाज र सञ्चारमाध्यम यसकै पछि लाग्छ । घर गाडी नजोड्नेको पनि प्रगति छ नि । यहाँ अध्याँरोमा घर धानेर बस्नेहरु कति छन् । तर हामी खाली उज्यालोको देखावटी रवाफमा दौडिरहेका छौं । 'जात्रैजात्रा' ले यिनै विषयवस्तुको कथा बुनेको छ ।
अन्त्यमा जीवन के हो ?
जीवन 'जात्रै-जात्रा' हो । तर रमाइलो जात्रा हो कि, गाइजात्रा हो, त्यो भने शुक्रबार थाहा हुन्छ । यसबाहेक मानिसलाई शुद्ध बनाउने भनेको कलाले हो । तपाइँ जे हो त्यही हुन कलाले सहयोग गर्छ । दुःख, कष्ट र गाँठो फुकाउने प्रयास गर्नु र बुझ्नु नै जीवन हो ।
अन्तिम अपडेट: जेठ २७, २०७७
किर्ते गरेको आरोपमा वडा सचिवसहित तीन जना पक्राउ
लकडाउनकाे प्रभाव : टोलटोलमा शिक्षक
ओखलढुङ्गामा थप तीन जनामा काेराेना पुष्टि
स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच वृद्धिका लागि अनुसन्धान आवश्यक : मन्...
दैलेख : जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा काेराेना पुष्टि भएपछि कागजप...
आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या घटाउँदै कुवेत, दक्ष श्रमिकलाई प्राथमिक...
साउदीले थप तीन महिना भिसाको म्याद थपिदिने, जरिवाना नलिने
कैलालीमा ओली र प्रचण्डका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट
अर्घाखाँची : काेराेना परीक्षण रिपाेर्ट नेगेटिभ आएपछि १५७ जना...
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट साउनदेखि, कति लाग्छ खर्च ?
विदेश जान सोमबार मात्रै ४१० जनाले लिए पुन: श्रम स्वीकृति, यू...
उपभोक्ता समितिले थाल्याे रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरकाे पुनर्निर्माण
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव रमाइलोको रुपमा हेरिरहेका छौँ : कांग्रेस
दाङ : वडाध्यक्षमाथि आक्रमण गरेकाे आराेपमा थप दुई जना पक्राउ
नेकपामा सत्ता संघर्ष : दुवै गुट फुटको भारी अर्कोलाई बोकाउने कसरतमा
स्थायी रुपमा बसाइँ सरी आउनेलाई दुहुनो गाई उपहार